Nooca conve Gawaarida gudbinta
Qaabdhismeedka: Nidaamka Gawaarida
Lambarka Moodalka XYLP
Qiyaasta Miisaanka: Codsiga: Codsi Macaamiil aan caadi ahaynCN mashiinka
Halbeegyada Farsamada ee kaabayaasha ah
Taageeridda fogaanta lugta
(1) Awoodda mootada waxaa lagu go'aamin karaa ballaca wax ku oolka ah ee B2, L1 iyo kor u qaadista dhererka H.
(2) Haddii xarkaha silsiladdu ay ka duwan tahay, dhererka H1 sidoo kale wuu ka duwanaan doonaa.
Xuddunta 31.75mm.Min. Dhererka H1 waa 100mm.
Xuddunta 38.1mm Min, dhererka H1 waa 135mm.
Xuddunta 50.8mm Min. Dhererka H1 waa 180mm.
Xuddunta 63.5mm Min dhererkeeda H1 waa 230mm.
Xuddunta 101.6mm Min dhererkeeda H1 waa 260mm.
(3) Qiyaasaha guud ee haanta biyaha waxaa lagu samayn karaa muuqaalo kala duwan iyadoo loo eegayo baahida macmiilka.
(4) Waa loo qaabeyn karaa loona been abuuri karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macmiilka.
Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu soo ururiyo laguna daabulo dhammaan noocyada qaab duub ah, cufnaanta, xargaha iyo jajabyada. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa qalabka mashiinka CNC, xarunta wax lagu farsameeyo iyo khadka wax soo saarka ee dabacsan. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sida xamuul loogu talagalay qaybaha yaryar ee feer iyo qaboojinta qabow. Waa unug muhiim u ah howlaha qaboojinta qalabka mashiinka la isku daray. Qalabkani wuxuu hagaajin karaa jawiga hawlgalka, wuxuu yareyn karaa xoogga shaqaalaha, wuxuu hagaajin karaa heerka otomaatiga.
Waxaa jira qalab ka hortag culeys xad dhaaf ah oo farsamo oo ku yaal dhidibka guud. Marka silsiladda xoqintu ay ku dhegan tahay walxo waaweyn, culeys xad dhaaf ah ayaa siiban kara, si loo ilaaliyo mootada wadista.
Qalabka mashiinka dhaadheer ee suunka dhaadheer ayaa inta badan loo isticmaalaa gudbinta jajabyada mashiinka mashiinka dhaadheer ee Longmen CNC iyo mashiinka caajiska dheer.
Guud ahaan marka laga hadlayo, waxaa jira afar nooc oo silsilad sagxad ah, 31.75mm, 38.1mm, 58.8mm iyo 63.5mm Xaaladaha qaaska ah, waxaad dooran kartaa 101.6 silsilad xambaarsan gegida weyn. . Cabirka waxaa go'aaminaya macaamiisha. Haddii aad rabto inaad doorato qalabka wax lagu dhejiyo ee suunka, waxaad na siin kartaa dhererka, L iyo L1, ama L2, dhererka dhererka H, ​​ballaca B1 ama B. Badanaa xagalku waa 60 °, xaalad gaar ah xagalku wuxuu noqon karaa laga dhigay 30 ° ama 45 °.
Hubi xiisadda oo adkee haddii loo baahdo
Bedel qaybaha jajaban
Eeg buugga hawlgalka
Hubi dillaacyo iyo waxyeelo
Beddel fiilooyinka cilladaysan
Ka gudub labada dhibic bedel ahaan adoo adeegsanaya gacanta
- Qalabka mustaqbalka
Hubi siideynta, dhaawaca, iyo burburka
Weelka waa inuu ahaadaa mid aamin ah
Hubi biraha hagaha ee duugista,
Hubi markaad beddesho saxanka fiiqan
Hore: Filter filter for filter qaboojiyaha, filter filter duub
Xiga: Suunka rarka (suunka birta, silsiladda silsiladda)
Qalabka mashiinka loo yaqaan 'magnetic chip'